Kuzovulwa amakolishi othisha | isiZulu
Kuzovulwa amakolishi othisha
Bayashoda kakhulu othisha eKZN
Kuzothuthukiswa amakolishi eKZN
Kuzovulwa amakolishi othisha eKZN
Johannesburg - Zise mome izinhlelo zokuthi kubuyiswe amakolishi afundisa ubuthisela, nekubhekeke ukuthi aqale ukusebenza ngonyaka ozayo, kusho uNgqongqoshe woMnyango wezeMfundo emazingeni aPhakeme uBlade Nzimande.
Ekhuluma esidlweni sasekuseni ebesihlelwe yiephephandaba iNew Age, eGoli, uNzimande uthe kuzovulwa iNdebele College Campus, eSiyabuswa, eMpumalanga.
Ikolishi lizosebenzisana ne-University of Johannesburg, ngemuva kwalokhu kuzovulwa amanye amakolishi amathathu KwaZulu-Natal, iseLimpopo nase-Eastern Cape.
"Phakathi kuka-1994 no-2000, uhulumeni wavala amakolishi afundisa ubuthishela, wawahlanganisa nezinye izikhungo. Inhloso yalokhu kwabe kungukulinganisa imfundo eyabe ingalingani ngenxa yezinhlelo zikahulumeni wobandlululo."
UNzimande uthi ngonyaka ka-2012, uMnyango waqaphela ukuthi baningi abantu ababhalisela ukwenza izifundo zobuthishela.
Uthi balinganiselwa ku-38 000 abafundi ababhalisa ngo-2009, kwathi ngo-2010 kwabhalisa abangaphezu kuka-41 000.
Emizuzwini eyi-7 edlule
Epping - 18:01:23 PM SLOW MOVING TRAFFIC towards Epping Ezinye zasemigwaqeni